Khibraddu waa bilaash, kheyraadku ma ahan ... | Martech Zone
Isniintii, September 25, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan joogaa guriga maanta. Si fiican uma dareemayo - Waxaan u maleynayaa in saacado badan, saacado badan oo shaqo iyo culeys ay i hayaan. Waxaan ku soo duubay sariirtii korontadii ayaa iga baxday. Way ka sii xumaan kartaa haddii roob da'o iyo qabow.
Waxaan haystay wakhti aan ku aqriyo oo aan ku seexdo subaxan si aan isugu dayo inaan iska fogeeyo wixii cayayaanka ah ee aan haysto. TechZ waxay xustay dhamaan buugaagta aan aqrinayo usually badiyaa ma ahan wax kayar 3. Waxaan aqriyaa 3 hada hada waxaan haystaa 2 dheeri intaas kadib. Waan jeclahay akhriska. Waxay nadiifisaa madaxayga waxayna igu maaweelisaa in ka badan daawashada filim ama telefishan. Waxaan u sheegayaa caruurteyda in waxa ugu weyn ee aqrinta ay tahay inaad madaxa ama rinjiga ka sawiraan sawirka ama filimka. Markii aan tago daawashada filim laga qoray buug, inta badan waan niyad jabo.
Waan qooraamayaa… waxaanna kaliya ii hayaa 30 ama wax ka badan daqiiqado laptopkeyga. Deriskeygana waxaa laga yaabaa inuu dhaqso iigu helo aniga oo afduubaya router-kiisa (dabagal la'aan, dabcan). Markii aan aqriyay waxaan u fikiray, waxaanan doonayay inaan wax ka qoro.
Waa tan aragtidayda… macluumaadku uma qalmo sidii uu ahaan jiray. Internetka, aqoontuna waxay noqoneysaa mid raqiis ah oo jaban marka labaad. Maalmaha shaqaalaynta la taliyayaasha si ay noogu sheegaan waxa aan waa in wax qabad ayaa naga dambeeya. Taabadalkeed, waxaan shaqaalaysiinaa la taliyayaal wixii ay qabteen awgood awooddo noo qaban.
Kheyraadka qiimahiisu waa sii kordhayaan aqoontuna way sii yaraaneysaa.
Waxaan haystaa aqoon igu filan oo aan ku dhiso shirkad weyn. Waxa iga maqan waa agabyada - waqtiga iyo lacagta. Markii aan wareysto lataliyeyaasha aragtida, badanaa maahan waxa ay ii sheegi karaan ama ii sheegi karin. Xaqiiqdii, sida caadiga ah waxaan fahamsanahay wax yar oo ka badan waxa ay ka qabtaan waxa aan ka codsanayo. Haddii aan ku qanco iyaga, waxaan u kireystaa inay qabtaan shaqada gacanta ku haysa… maxaa yeelay waxay diiradda saari karaan feejignaantooda oo keliya arrinta. Ma awoodi karo inaan taas sameeyo.
Sanado kahor, waxaan hagaajin jiray gaarigayga. Waxaan ku sameeyay wax walba oo ku saabsan gaariga. Waqti baan haystay, markaa waan tagi lahaa oo waxaan iibsan lahaa buug. Markii aan sii weynaaday, kuma raaxeysto xoqidda jilbaha mar dambe sidaa darteed waxaan u keenayaa dukaan. Way ka qiimo badan tahay waqtigaygu inaan haysto qof kale oo hagaajiya halkii aan anigu hagaajin lahaa. Xitaa iyada oo kharashka xad dhaafka ah ee dayactirka baabuurta.
Sow kani maahan jihada ay wax walba ku sii socdaan? Aynu tusaale u soo qaadanno Mashiinka Raadinta (SEO). Si kalsooni leh ayaan ugu kalsoonahay in, waqtiga la siiyay, aan dhisi karo deegaanno sanduuq ah, rogrogo iyo tijaabino si aan u arko sida aan ugu kici karo dusha sare ee algorithms-ka Search Engine-ka. Laakiin waqti uma haysto taas. Hubaal - qof kastaa ma akhrin karo baloog oo wuxuu bilaabi karaa inuu taas sameeyo. Waan fahmay… laakiin dad badan ayaa awooda.
SEO aqoonta is bilaash ah - waxaa jira uruurinta boggaga 'SEO' iyo baloogyada internetka oo si joogto ah ugu dhejiya imtixaanadooda iyo natiijooyinka. (Waxaan isticmaalay xoogaa ka mid ah tweaks-ka boggeyga). Ma doonayo inaan hoos u dhigo la taliyayaasha SEO SEO iyagu waa qiimo lacagta. Laakiin iyagu uma qalmaan lacagta khibraddooda darteed, waxay ugu qiimo yihiin lacagta kheyraad qiimo leh. Waxay sameeyaan maalin kasta si aanad u baahnayn!
Internet ah is Macluumaadka Superhighway. Waan ogahay inay taasi duug tahay oo cliche, laakiin waa run. Qaybinta aqoonta ayaa marba marka ka dambaysa sii raqiisanaysa Haddii aan doonayo inaan ogaado sida loo daaweeyo maqaarkayga qallalan ee Jack Russell ama waxaan doonayaa inaan abuuro qaab-dhismeedka Ajax… halkaas ayey ku habboon tahay inaan raadiyo.
Maaddaama Shabakaddu ay si aad ah u abaabulan tahay oo ay fududahay in la raadiyo macluumaadka, waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay inaan nafteena iska eegno sidii 'khubaro' iyo in ka badan 'ilaha'. Khibraddu way ku dhan tahay meesha waana u bilaash qaadashada. Kheyraadka maahan.
Sep 26, 2006 at 10: 26 AM
Waxaan u maleynayaa inay digaagan qoolleydu si fiican u leeyihiin sheegashada aad soo bandhigeyso… http://www.telco2.net/blog/2006/09/profiting_from_adjacent_busine.html